Ku rakibidda GNU / Linux mid kale oo HDD ah oo aan lahayn qalab rakibidda | Laga soo bilaabo Linux
Ku rakibidda GNU / Linux mid kale oo HDD ah iyada oo aan la rakibin disk
Maanta waxaan eegi doonaa sida looga guuro dhammaan xogta hal darawal mid kale, shaqo waxtar yeelan karta haddii sababo jira awgood aan ugu baahano inaan ku badalno wadista hadda adag ee kumbuyuutarkeena mid kale (oo isku mid ah ama awood ahaan ah).
Dhowr maalmood ka hor, booqasho aan caadi aheyn oo aan ku tagay guriga saaxiibkay (oo si kadis ah ugu haajiray GNU / Linux bilo ka hor adkaygtaydii), wuxuu si farxad leh ii tusay Hard Drive cusub oo ay siiyeen (500 Gb HDD in kastoo in badan oo ka mid ah ay u muuqato inay tahay qalab yar oo awood leh, halkan Jurassic Cuba wali waa tallaabo weyn oo loo qaadayo keydinta xogta ballaaran) taasna waxaa loo baahan yahay in lagu beddelo wixii horay u duugoobay ee badhkood fashilmay 160 GB disk.
Soo jeedintiisa lafteedu waxay ahayd in diskigii hore meesha laga saaro oo 500 GB disk la dhigo meeshiisa, ka dibna la rakibo Debian, kaas oo ahaa distro-kii aan ku rakibey diskigii hore, isla markaana waqti ku qaato in dib loo soo celiyo dhamaan goobaheedii.
Intii ay taasi dhacaysay, inaadeerkay saaxiibkay ayaa sugayay dhamaadka shaqadan inuu qaato 80 GB disk, oo isna beddeli doona 40 GB disk ah kombuyuutar aad uga da 'weyn.
Faahfaahinta waxaas oo dhan waa inaanan xitaa la socon disk rakibis ah Debian, iyo wax ka yar meelaha keydka ee gacanta lagu hayo. Marka fikradda ah rakibidda nidaamka iyo codsiyada ma ahan mid aan gaari karno, illaa aan gurigeyga u aado inaan ka helo waxa lagama maarmaanka ah, laakiin ka soo guuridda dhammaad ka mid ah magaalada Santiago de Cuba oo aan u wareego meel kale ma noqonayso beddel kale Aniga ahaan, magaalo ay gaadiidka rasmiga ah (mootooyinka gaarka loo leeyahay) ay labanlaabmeen qiimahoodu sanadkaan cusub (nimcadu waxay igu kacaysaa in aan ka yarayn 40 pesos).
Taasi waa markii dhimbiilaha la shiday: in la dubo albumka. Waan ogahay in cloning-gaan uu noqon lahaa waxa ugu horreeya ee inbadan oo idinka ka mid ah ku dhici lahaa, laakiin aniga ahaan, alifbeetada Hawlahaas, waxay umuuqdeen beddel lama filaan ah oo toos ah oo ay si toos ah ugu direen ilaahyada Open Olympus.
Ka dib markaan tirino hordhaca lagama maarmaanka ah, waxaan u gudbineynaa dhinacyada farsamada ee kiiska laga hadlayo. Markii hore waxaan haysannaa 80 GB Hard Drive oo leh nidaamka kala-soocida soo socda:
/ dev / sda1 / / dev / sda5 swap / dev / sda6 / guriga
Iyo 500 GB Hard Drive-ka cusub ee aan u qaybin doonno sida soo socota:
/ dev / sdb1 / / dev / sdb2 swap / dev / sdb3 / guriga
Kuwo badan ayaa xaqiiqdii ogaaday in marka loo eego Hard Drive-kii ugu horreeyay uu jiro boodbood ka sda1 ilaa sda5, tani waa sababta oo ah marka la qeexayo qeeybinta, waxaa jira qeyb asaasi ah oo la qaadi karo oo ah sda1, ka dibna qeyb dheeri ah oo loo qeybiyay labo sda5 ysda6.
Sidoo kale, mar uun waxaan u maleynayaa inay tahay inaan tirtiro qeeyb uu saaxiibkay ku xareyn jiray Windows 7 la ceyriyay.
500 Gb adag ayaa loo kala qaadaa si tirooyinka qeybta loo kala helo loo helo si isdaba joog ah. Cajaladdan ayaa loogu magac daray / dev / sdb maxaa yeelay adoo ku dhejinaya dekedda SATA, waxaad isla markaa la wadaageysaa nidaamka disk horay u jiray, / dev / sda.
1 Formatting qoruhu
2 Qaybaha dharka
3 Diyaarinta dib u bilaabida
4 Dammaanad qaadka bilowga. Ku rakibida Grub2
5 Tallaabooyinka ugu dambeeya
Si loo abuuro qoruhu waxaan u isticmaali karnaa qalab muuqaal ah sida farxay, ama waxoogaa codsi ah oo ka socda qalabka sida cfdisk. Xusuusnow in tallaabadani, waxaan ka nimid nidaamka qalliinka ee ugu horreeya Hard Drive, midka 80 GB.
Taasi waa, tan, waxaan ka abuuraynaa saddexda qaybood ee Hard Drive-ka cusub. Marka qaybaha la abuuro, waa in loo qaabeeyaa:
Waxa kaliya ee aan qabanay waa qaab / dev / sdb1 iyo / dev / sdb2 sida ext4 iyo / dev / sdb2 sida SWAP.
Dalabka mkfs.ext4 waxay lamid tahay mkfs -t ext4. Waa inaan tixgelin siino marka dib loo bilaabayo wadista cusub ee adag, waa inaan u sheegnaa nidaamka inuu leeyahay qayb isdhaafsi cusub (kala beddelashada qaybta):
Waxaan isticmaalnaa sda2 mana isticmaalno sdb2, maxaa yeelay markaan dhameyno, waxaan ka saari doonaa disk-kii hore.
Horaan ugu dhacaynaa digaag digaag digaag. Ma jiro wax la kariyo oo qeexan oo loogu talagalay in lagu dhejiyo qaybta. Xaaladeena, waa inaan sameeynaa nuqul sax ah oo ka kooban / guriga, tan waxaan u sameyn doonnaa waxyaabaha soo socda (xidid ahaan):
cd / media mkdir sdb3 mmount -t ext4 / dev / sdb3 / media / sdb3 rsync -a / guriga / saaxiibkey media / sdb3
Nasasho, waan sharxayaa:
Gudaha / warbaahinta waxaan ka sameysanay tusaha oo leh magaca sdb3 (kaas oo u dhigmi kara magaca qeybta qeybta diskiga cusub), si marka kor u kaca uusan u abuurin jahwareer.
Markaa waxaan u adeegsaneynaa amarka rsync si aan u waafajino feylasha iyo fayllada / guriga ilaa / warbaahinta / sdb3, maadaama qeybta sdb3 noqon doonto / guriga.
Calanka -a Waxay naga caawin doontaa inaan ilaalino rukhsadaha, mulkiilaha, taariikhda iyo tilmaamaha.
Waxaan si caqli leh u adeegsanay / guriga / saaxiibkay iyo ma / guriga / saaxiibkay /, maxaa yeelay haddii aan dhigi lahaa guntinta dhamaadka saaxiibkay, waxaan si gaar ah u koobiyeyn lahaa faylasha iyo faylalka ku jira gudaha / guriga / saaxiibkay. Wixii aan sameynay waxay u dhigmaan dhigista:
rsync -a / guriga / / warbaahinta / sdb3
Sida kiiska saaxiibkay, wuxuu ku leeyahay hal adeegsade guriga dhexdiisa, dhib malahan in la dhigo hal ama xariiq taliska kale.
Hadda waa waqtigii la isku duubi lahaa xididka / qaybta, taas oo, dabcan. Waa daqiiqad xasaasi ah oo xasaasi ah, maaddaama qaar ka mid ah fashilka ay naga tagi karaan qaybta iyada oo aan la bilaabin, sidaas darteedna disk adag oo aan lahayn nidaam.
Tilmaam ka hor tallaabada xigta waa in waxoogaa nadiifin ah lagu sameeyo qaybta xididkeenna si loo badbaadiyo booska loona yareeyo taraafikada xogta aan loo baahnayn ee ka socda hal darawal oo kale.
Way fiicantahay inaad horey u faaruqiso qashinka dib loo warshadeeyo (xitaa ka hor inta aan la qurxin guriga), tirtir xirmooyinka aan la isticmaalin iyo xirmooyin gaar ah oo aanan u baahnayn:
dpkg -l | xirmo ^ rc dpkg --purge xirmo
Waxaan sidoo kale hubin karnaa inaan ka saarno xirmooyinka keydka maxalliga ah: kuwa aan kala soo baxnay cusboonaysiin kasta ama rakibaadda bakhaarada, oo la keydiyay:
Markaad sameysid tillaabooyinka kor ku xusan waxaad hubaal ogaan doontaa inay xoreyn karaan xoogaa GB ah oo bannaan. Hagaag, aan isku xidho xididkeena /.
Marka laga hadlayo qaybta xididka, waxaa lagugula talinayaa inaad nuqul ka sameysid xogta xoogaa yar. Waxay qaadan doontaa waqti ka yar kan guriga maxaa yeelay sida muuqata waxay ka yartahay xog uruurinta wax yarna waa loo qabtaa u janjeera inaad fashilanto waa wax aan waxba ka jirin oo ma jiri doonaan khaladaad leh rukhsad gaar ah
Sadarka amarka kiiskan waa:
dd haddii = / dev / sda1 ee = / dev / sdb1
Xaaladdan oo kale maahan inaan wax kor u qaadno. Waqtiga lagu dhammaystirayo qalliinka wuu sii yara dheeraan doonaa, laakiin wuu u qalmi doonaa.
Diyaarinta dib u bilaabida
Halkaa marka ay marayso, horeba xijaab / dev / sdb1 waa xinjir ka mid ah nidaamka xididka lagu rakibay diskigeenii hore. Dhibicdu waxay u timid si loo hubiyo in markaan ka saareyno 80 GB disk, kumbuyuutarkeennu uu aqoonsado oo uu ka kabahayo diskiga 500 GB.
Waa waqtigii la taaban lahaa faylka caanka ah ee fstab (midka 500 ee disk laga helay / warbaahinta / sdb1 / iwm / fstab).
Oo waxaan heli doonnaa wax la mid ah tan:
# / iwm / fstab: macluumaadka nidaamka faylka ee joogtada ah. # # proc / proc proc nodev, noexec, nosuid 0 0 #Entry for / dev / sda1: UUID = 6b192eef-e188-4e07-94de-14c95e02de78 / ext4 qalad = remount-ro 0 $ #Entry for / dev / sda2: UUID = 3bd60ec0 -92f3-4ea6-a4d3-aaaf27dd8b8e ma jiro swap sw 0 0 #Entry for / dev / sda3: UUID = 3828f973-3b20-4019-9fe2-8296c755be31 / home ext4 defaults 0 2
Hadda waxaan u baahanahay inaan ka bedelno UUIDyadii hore (kuwa ku jira faylkaas fstab waxay ka yimaadeen 80GB disk) una beddelaan UUIDs cusub (oo ka yimid 500GB disk cusub). Si tan loo sameeyo, waxa lagaa doonayo inaad sameyso waa inaad ka heshaa aaladaha UUID-kooda, tanna waxaa lagu sameeyaa dhowr siyaabood:
Hal ikhtiyaar ayaa ku jiri kara amarka:
Iyo sidoo kale adeegsiga xidid ahaan:
Hadda waa inaan kaliya ku beddelnaa UUID-yada fstab kuwa saxda ah.
Dammaanad qaadka bilowga. Ku rakibida Grub2
El debian hiinraag lagu rakibay saxibkeygii hore ee Hard Drive wuxuu u adeegsadaa Grub2 sida boot system, marka MBR (Diiwaanka Master Boot) ee Hard Drive-ka cusub (midka 500 GB ah) waa inaan rakibnaa mid cusub GRUB.
Waa run in faylasha qaabeynta horay loogu qoray / galka buugga, laakiin MBR (qeybta koowaad ("qaybta eber") ee diskiga adag) Madhan yahay, sida ay hadda tahay, ma noqon karto mid la jabsado.
Qaabeynta ayaa lagu keydiyay gudaha /boot/grub/grub.cfg, laakiin feylkaan waxaa abuuray grub-mkconfig, markaa ma noqonayso mid lagu talin karo inaad gacan ku saxdo.
Waxa ugu fiican ayaa ah, mar haddii qaybta cusub la dhejiyo (xusuusnow in qaybta xididdada cusub ee cloned aan la saarin, dd kabaha aan ku xirnayn xijaab):
buur -t ext4 / dev / sdb1 / media / sdb1
Hadda waa inaan ku shubnaa GRUB2 MBR adoo samaynaya waxyaabaha soo socda:
grub-rakib / dev / sdb
Iyo voila, taasi waa sahlan tahay, horey ayaan u haysannay GRUB lagu rakibay MBR ee 500 GB Hard Drive.
Tallaabooyinka ugu dambeeya
Hada kombiyuutarka waan damineynaa, waxaanna ka saareynaa saaxiibkey 80 Gb Hard Drive, waxaan siinayaa ina-adeerka (arag sheekada hore), kumbuyuutarka dib u daar, faraha iskaga dhaaf ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ku rakibidda GNU / Linux mid kale oo HDD ah iyada oo aan la rakibin disk
Saaxiib, ma garanayo haddii aan khaldanahay laakiin waxaan u maleynayaa - waxaan u maleynayaa - intaan la isticmaalin amarka 'dd' in qeybta u socoshada ay la egtahay cabirka isha. Haddii kale, kun raalli gelin.
Waa isku mid sidaan filayo
dd wuu iskudarsan doonaa qaybta iyo wixii dheeri ah ayaa ka tagi doona meel aan la qoondeyn karin, marka maadaama ay u baahan tahay meel badan oo lagu rakibo barnaamijyo cusub, ma oggolaan doonto.
Ku jawaab Nebukadnesar
Macno malahan hadii qeybta udhaxeysa ay ka weynaato qeybta isha, markaas nidaamka faylasha waxaa loo sheegi karaa inuu isticmaalo cabirka dheeriga ah.
Jawab John Edisson Ortiz
Taasi waa epic. Aan aragno haddii aan rakibi karo Debian laakiin Qaab-dhismeedka (amarrada saafiga ah).
Waxaad isticmaali lahayd dd si aad uhesho MBR:
dd haddii = / dev / sda of = / dev / sdb bs = 512 tirinta = 1
Uma maleynayo inay lagama maarmaan tahay in qeybaha ay si sax ah isku mid ahaadaan, ugu yaraan qaanso wiki ma sheegayo, waa in la isku dayaa. Salaan.
Taasi way fiicantahay, laakiin ma fahmin sababta loo sameeyo dd haddii = / dev / sda of = / dev / sdb laga boodo 512 baat ee ugu horeeya?
Waayahay, waan fahmay, farqiga ayaa ah in bilowga oo kaliya qaybta loo qaybiyey waana taas sababta 512 bytes ee MBR looga boodo. Aad baad ugu mahadsantahay talada RudaMacho.
The Pelu dijo
Waad salaaman tahay, ma qorsheyneysaa inaad cusboonaysiiso nidaamkaaga? Waxaan u idhaahdaa windows xp
Jawaab El Pelu
Waa salaaman tihiin, waxaan u maleynayaa in adeegsiga clonezilla hawsha ay ka fududaan laheyd, laakiin way fiicantahay inaad sidan ku tijaabisay, ka dib oo dhan waa ruuxa «hacker»
Slackware-ka waxaan u isticmaalay daamur si aan u sameeyo nuqul dhameystiran oo feylal ah inta udhaxeysa cajaladaha, kaas oo ilaaliya rukhsadaha sidoo kale waxaan ka faa'iideystaa fursad aan ku keydiyo, feylka fstab wuu ka fududyahay sidaa darteed looma baahna in wax laga beddelo uuid, waa ku filan tahay inaad ku abuurtay qormooyin isla si isku mid ah, sida loo isticmaalo waxaa u fududaanaysa sameynta bootka ...
Aad u fiican 😀
In aan waayo-aragnimo gparted nuqul - clone - qoruhu si dhakhso leh
Hadana hadaad ubaahantahay inaad balaadhiso ama jarto, sidoo kale waad awoodaa
Ku jawaab mitcoes
Tilmaame-yaableh faahfaahsan, aad baad ugu mahadsantahay wadaagistaada.
Waxaan qabaa su'aal: miyay lagama maarmaan tahay in loo isticmaalo amarka isweydaarsiga nidaamka si loo ogaado qaybta isdhaafsiga, mise waxay ku filnaan laheyd in la beddelo UUID ee fstab?
6 bilood kahor waxaan ku caajisay degenaanshaha debian-ka iyo kde 4.8. Waxaan rabay KDE kii ugu dambeeyay !! Ma aanan haysan disk rakibida ama xasuusta USB .. sidaas darteed waxaan xasilay xasiloonigeyga oo leh ku dhowaad qaabab isku mid ah oo sharraxaya isla markaana hagaajinaya dhinaca.
Waxaan kugula talinayaa dhaqankan dhammaan dadka isticmaala Linux halkaas, nidaamkeenu uma baahna wax ka badan 15 GB. by xijaab xidid. iyo laba jeer ama wax yar ka yar ma aha wax badan.
Wax ku biirinta wanaagsan weligeed sidan kama fududaan laheyd sida sharaxaad cad oo cad ah ... Hambalyo walaal, waxaad tahay macallin gnu / linux !!!
Ujawaab Victor Challa
Casharro Aad U Fiican. Aad u cad!
Waxa kale oo jira amarka "dd"
Ku jawaab YoeLoco
Soo Degso xirmada korantada ee Qalabka LINE